တစ်ရှူးအထုပ်စက်စက်ရုံ China Tissue Package Machine ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ TB-140 စက္ကူအရည်အသွေး 0.03-0.04mm အများဆုံးထုပ်ပိုးမှုသတ်မှတ်ချက် L (90-120) မီလီမီတာ, F100-130mm ထုပ်ပိုးမှုမြန်နှုန်း 60-100 လိပ် / မိနစ်အဓိကမော်တာပါဝါ 1.5KW စုစုပေါင်းပါဝါ 5.71KW Power supply type 3phase 4wire 380V 50Hz Machine ဆူညံသံ≤80dBလေကြောင်းထောက်ပံ့မှု 0.5-0.8 Mpa လေသုံးစွဲမှု 120-160L / min စက်အရွယ်အစား 2966 * 2444 * 1723mm စက်အလေးချိန် 3000KG မြင့်မားသောလုံခြုံရေးအဆင့်ရှိသည်။ စက်လည်ပတ်နှုန်းသည်တစ်မိနစ်လျှင် ၁၀၀ လိပ်အထိရောက်နိုင်သည်။ ...
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ TB-120 ပုံး၏စက္ကူအရည်အသွေး 300-400g / m3 ထုပ်ပိုးမှုနှုန်း 30-100 boxes / min အများဆုံးထုပ်ပိုးမှုသတ်မှတ်ချက် L240mm * W120mm * H90mm အပူအရည်ပျော်စက်ပါဝါ 2.32kw Power supply 380V50HZ စက်ဆူညံသံ≤80dBလေအေးပေးစက် 0.5-0.8Mpa ပါဝါ စားသုံးမှု 6.2KW စက်အရွယ်အစား L3250mm * W1600mm * H1800mm စက်အလေးချိန် ၂၁၀၀ ကီလိုဂရမ်မြင့်မားသောလုံခြုံရေးအဆင့်အတန်း။ စက်လည်ပတ်နှုန်းသည်တစ်မိနစ်လျှင်ဘူး ၁၀၀ အထိရောက်နိုင်သည်။ အဆိုပါသိပ္ပံနည်းကျဒီဇိုင်းနှင့်ထိပ်တန်း ...
1.Machine Outlook 2. အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်အားသာချက်များ 2.1 TB-180 သည်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၂.၂ တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅၀ ဘူးအထိရှိသောအမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်။ ၂.၃ အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးစွမ်းဆောင်ရည်။ ၂.၄ ကျစ်လျစ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှု။ ၂.၅ photoelectric မျက်လုံးအလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းခြင်းခြေရာခံခြင်းစနစ်ကိုလက်ခံခြင်း။ ပုံးများသို့မဟုတ်လက်ကမ်းစာစောင်များမပြတ်ပါက ၂.၆ အလိုအလျောက်ရပ်တန့်ပါ။ 2.7 အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးသို့ပြောင်းရန်လွယ်ကူသည်။ ၂.၈ Overloading အတွက်အလိုအလျောက်ကာကွယ်ခြင်း။ ၂.၉ ကျော်ကြားသော Ame ကိုအသုံးပြုခြင်း ...
၁. စက် Outlook ၂. အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်ကောင်းကျိုးများ ၂.၁ Servo motor, touch screen, PLC control system နှင့် HMI သည်လည်ပတ်မှုအဆင်ပြေစေရန်အာမခံသည်။ ၂.၂ တစ်မိနစ်လျှင် ၉၀ ဘူးအထိရှိသောမက်စ်တည်ငြိမ်သောစွမ်းရည်။ ၂.၃ ကျစ်လျစ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှု။ ၂.၄ photoelectric မျက်လုံးအလိုအလျောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောစနစ်ကိုစစ်ဆေးခြင်း။ ၂.၅ ပုံးများသို့မဟုတ်လက်ကမ်းစာစောင်များမပြတ်ပါကအလိုအလျောက်ရပ်တန့်ပါ။ ၂.၆ အရွယ်အမျိုးမျိုးသို့ပြောင်းရန်လွယ်ကူသည်။ ၂.၇ Overlo အတွက်အလိုအလျောက်ကာကွယ်ခြင်း ...